YEYINTNGE(CANADA): Friday, November 26
ဖားမင်းဆွေရဲ့ အိမ်ပေါ် ထိတက်ခုတ်တာ ..
ကိုကိုကျိုက်ဆိုတာ ကျိုက္ခမီသား .. ကြားသမျှကို ပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ..ကျိုက္ခမီသားတွေဆိုရင် ကျုပ်ရေးထားသမျှ အားလုံးဟာ လိုတောင်လိုနေဦးမယ်ဆိုတာ သိလိမ့်မယ် .. ဖားမင်းဆွေနဲ့ နီးစပ်မယ်ဆိုရင် ပြန်မေးကြည့်လိုက် .. ..
သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထက် ဖားမင်းဆွေဆိုတဲ့ကလောင်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ဆိုတာ အားလုံးသိထားသင့်တယ်လို့ ကျုပ်ယူဆလို့ ရေးလိုက်တာ .. အပုတ်ချတယ်လို့ ယူဆတာကတော့ ဖတ်သူရဲ့ ခံစားချက်ပဲ..သူ့ကိုယ်သူ ဟိတ်ဟန်ကြီးနဲ့ ဘယ်လိုပဲပြောနေနေ သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို သိထားတော့ သိအောင်တော့ ပြောရမှာပဲ ..
ကျုပ် NLD လား၊ တစညလား၊ ကြံ့ဖွတ်လား၊ သာမန်ပြည်သူလားဆိုတာတွေနဲ့က မဆိုင်ဘူး။ ကပ်ဖားရပ်ဖားရေးထားတဲ့ စာတွေဝေဖန်ဖို့ရာအတွက်က ဖားမင်းဆွေဆိုတာ ဘယ်လိုလူ၊ဘယ်လို ကိုယ်ကျိုးရှာတယ်၊ အဲဒီကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လက်ရှိအစိုးရကို ဘယ်လိုမြှောက်ပင့်ပြီး ဘာစာတွေ ရေးနေတယ်ဆိုတာ သိတော့ဝင်ပြောတယ်ဗျာ ..
ပိုပြီးတိကျတာလေးတွေသိချင်သေးလား .. တလက်စတည်း ပြောပြလိုက်မယ် .. ကျွန်းသစ်တစ်တန် လေးသိန်းနဲ့ ကျိုက္ခမီအရောက်ခေတ်မှာသူက ကရင်တော နန်းသိုင်းထွန်းရွာကနေဝယ်ပြီးစင်္ကာပူကို မှောင်ခိုပို့တယ် ..
ဝရမ်းထုပ်ခံထိတာက ကျိုက္ခမီနဲ့ သံဖြူဇရပ်ကြား ကရင်တောင်ရွာမှာထားထားတဲ့ ကျွန်းသစ်တွေမိလို့ ..
ဓါးနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်ဆိုတာက လမ်းမှာခုတ်တာတောင်မဟုတ်ဘူး ..ဖားမင်းဆွေရဲ့ အိမ်ပေါ် ထိတက်ခုတ်တာ ..
ဖားမင်းဆွေချဲဒိုင်ဆိုတာ ကျိုက္ခမီမှာ နာမည်အရဆုံး..
နဝတခေတ်မှာ သူပိုင်တဲ့တရားဝင်လိုင်းလှေနံမည်က သိင်္ဂီမျိုးထွန်း ..တစ်ခြားလှေတွေ ရှိသေးတယ် .. သူ့ရဲ့ပထမဇနီး၊ ဒုတိယဇနီး၊တတိယဇနီး ဘယ်သူတွေ ဘယ်မှာနေ ဆိုတာတွေ အတိအကျထပ်ရေးလို့ရသေးတယ် ..
ဒီလောက်ဆို ဟုတ်တာနည်းနည်း မဟုတ်တာများများဆိုတဲ့စကားအတွက် လုံလောက်ပြီထင်တယ် ..
သူ့လိုကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာသမားတစ်ယောက်က အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ စကားကို ဟစ်နေတာကတော့ မတန်မရာ ခုတုံးလုပ်တယ်လို့ပဲ ကျုပ်ကတော့ သတ်မှတ်တယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/26/20100အကြံပြုခြင်း
26 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
26 Nov Yeyintnge's Diary
"လူထု နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" အပတ်စဉ်အမေးအဖြေ အစီအစဉ်
“လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” အစီအစဉ်ကို အာအက်ဖ်အေက အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ ညတိုင်း တင်ဆက်နေပါပြီ။ ဒီ အစီအစဉ်ကနေ ပြည်သူတွေ သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဖြေကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးမြန်းလိုသူတွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ မေးခွန်းတွေကို ရန်ကုန်မြို့က အင်အယ်လ်ဒီ ရုံးချုပ်ကို တိုက်ရိုက် ပေးပို့နိုင်သလို၊ အာအက်ဖ်အေကိုလည်း အင်တာနက်ကနေ ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။ အာအက်ဖ်အေ အီးမေးလ် လိပ်စာကတော့ burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် စောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေသူများကို နေအိမ်ခြံတံခါးမှ နှုတ်ဆက်နေစဉ်။ (Photo: AFP)
မေးခွန်းတွေကို တိုတိုနဲ့ လိုရင်းသာ ရေးသားစေလိုပါတယ်။ အဲဒီစာတွေကို အင်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်ကို တိုက်ရိုက် ပေးပို့သည်ဖြစ်စေ၊ အာအက်ဖ်အေကို ပေးပို့သည်ဖြစ်စေ၊ အမည် လိပ်စာ နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်တွေကို ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို အာအက်ဖ်အေက ခေါ်ယူ ဆက်သွယ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ မေးမြန်းစကားတွေကို အသံဖမ်းယူကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖြေကြားချက်နဲ့အတူ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ တခြား အခက်အခဲတွေကြားက အချိန်လုပြီး တင်ဆက်ရတာဖြစ်လို့ အားနည်း ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ရှိပါလျှင် သည်းခံခွင့်လွတ်ဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် သောကြာနေ့ပထမဦးဆုံး ထုတ်လွှင့်တဲ့ "လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" အစီအစဉ် ကို နားဆင်ပါ။
Where is U Khin Nyint
By ရော်နီညိမ်း သောကြာ, 26 နိုဝင်ဘာ 2010
တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၃၆)
နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့က တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို အမြောက်နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်နွယ် ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကို ဒီတပတ် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်သားဟောင်းတွေက ပြောပြထားပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ လူကြမ်းမင်းသားအဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်ခံနေရတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားကို မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အထူးမိတ်ဆွေနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတာမှာ မြောက်ကိုးရီးယားသံရုံးရဲ့ ဧည့်ခံပွဲတွေကို စစ်အစိုးရရဲ့ ထိပ်တန်းပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပဲ တက် ရောက်ချီးမြှင့်နေတာကို အစိုးရမီဒီယာတွေမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရာကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လက်ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရတို့ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပြန်ပြီး ထူထောင်ခဲ့ ကြတာပါ။ လက်ရှိ မြောက်ကိုးရီးယား-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ၁၉၈၃မှာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်စေခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ဗိမာန် ကို မြောက်ကိုးရီးယားသူလျှိုတွေရဲ့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့အတွက် ဒီ အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိခဲ့သူ တပ်မတော်သားတွေကို “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား" အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတော့ ၀ါရှင်တန် ဒီစီမြန်မာသံရုံးမှာ သံမှူးကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က လက်ရှိမြောက်ကိုး ရီးယား-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။၂၀၀၄ ခုနှစ်ပေါ့လေ၊ အဲဒီကာလလောက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မေးသလို၊ အမေရိကန် လွှတ်တော်ပေါ့လေ၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မီတီရဲ့ ဥက္ကဌ အထက်လွှတ်တော်က Senator (အထက်လွှတ်တော် အမတ်) Richard Lugar ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီပေါ့။
ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်။ ။ မှန်ပါတယ် ခင်ဗျ၊ Senator Richard Lugar ရဲ့ရုံးကို…
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ Democratic လား ၊ Republican လား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်။ ။ Republican ပါ ခင်ဗျ။ အဲဒီရုံးကို ကျနော်ရယ်၊ သံအမတ်ကြီး ဦးလင်းမြိုင်ရယ်၊ ကျနော်တို့ သွားခဲ့ရပါ တယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ Senator ကြီးဆီကို မသွားခင်မှာ Senator ရဲ့ staffer (လက်ထောက်အရာရှိ) ဖြစ်တဲ့ Keith Ruth ပေါ့လေ၊ သူ ကျနော်တို့သံရုံးကို နှစ်ခေါက်တိတိ လာပါတယ်။ လာတဲ့အချိန်ခါမှာ ဒီမြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သူတို့ သတင်းတွေကြား နေတယ်။ အဲဒီကိစ္စ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်နွယ်နေသလား၊ ဟုတ်ပါသလား ဆိုတာတွေ ကျနော်တို့ကို မေးခဲ့မြန်းခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ပေါ့လေ၊ သမ္မတ Bush လက်ထက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Colin Powell လက်ထက်မှာတော့၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက လာပြီးတော့ ဖြေရှင်းရတာ ကျနော် သိသလောက်၊ နယူးယောက်မှာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့ ဦးတင်ဝင်းနဲ့ တပ်မတော်ထောက်လှမ်း ရေးက ဗိုလ်မှူးကြီးလှမင်း နှစ်ယောက်က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mathew Dalley နဲ့ ဒီ NSC ပေါ့လေ၊ National Security Council (အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ) က Ms. Karen Brooks တို့ကို တွေ့ပြီးတော့မှ ပြန်ပြီးတော့မှ ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခါမှာ၊ ဒီဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို ဗြောင်လိမ်ခိုင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ တိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မှ တိုက် ရိုက်တွေ့ကြတဲ့ သဘောပါ။ ဟိုက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ငြင်းခိုင်းလို့ လာပြီး ငြင်းဆိုရတဲ့ အနေအထားမျိုး ကျနော်တို့ ပြန်ကြားသိရပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အဲဒါကို အမေရိကန်အစိုးရက လက်ခံခဲ့လား၊ အဲဒီတုန်းက သူတို့ ငြင်းတာကို။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်တို့သံရုံးကို မေးပါတယ်။ “မင်းတို့က မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ပြောတယ်။ ငါတို့ကို ဘာ သက်သေပြနိုင်မလဲ” ဆိုပြီး မေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ အာမခံခိုင်းတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီလို အာမခံခိုင်း တော့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အကြံပေးချက်အရ “မင်းတို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့မှ ငါတို့ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Colin Powell ဆီကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတဲ့အကြောင်းကို စာတစ်စောင်ရေးပေးပါလို့ ပြောပါတယ် ခင်ဗျ။ ရန်ကုန်က ဒါကတော့ သတင်းစကားအနေနဲ့ပေါ့လေ၊ ပြန်သိရတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေက ‘ ၀င်းအောင် ထိုးပေးလိုက်ပါကွာ’ ဆိုပြီး တော့ ပြောတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီလို ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးဝင်အောင်ရဲ့ လက်မှတ်ပါတဲ့ စာကို ကျနော်တို့ စာမူရင်းကိုပေါ့လေ၊ သံတမန်ချောစာအိပ်နဲ့ ပို့ပါတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ စာအိတ်ထဲက စာသားကို ကျနော်တို့ သိအောင်ဆိုပြီးတော့ fax နဲ့ ကျနော်တို့သံရုံးကို ထိုးပေးပါတယ်။ သံတမန်ဆန်ဆန်ပဲ ရေးထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချင်တဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ကို စွပ်စွဲနေသလို မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားအစိုးရတို့ဟာ ဒီ စစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာ မရှိပါဘူး ဆိုတာကို လိမ္မာပါးနပ်စွာရေးထားတဲ့ သဘောပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အဲဒီလို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တဘက်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် စာချွန်တော်ပေးပို့ပြီး ငြင်းဆိုနေတဲ့အချိန် မှာပဲ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးပညာရှင်တွေနဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)တွေမှာ အတူတကွ အလုပ် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဗီအိုအေကို ပြောပြခဲ့သူကတော့ ကပစ (၉)၊(၁၀)၊ (၁၂) တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး ဟောင်း ဦးမြင့်စိုး ပါ။
ဦးမြင့်စိုး။ ။ စင်္ကာပူကနေပြီးတော့ တဆင့် စင်္ကာပူတရုတ်တွေကနေ တဆင့် ကြားခံပွဲစားတွေနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားကို စေလွှတ်ပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားကပညာရှင်တွေကို သူတို့ခေါ်ယူဆွေးနွေးပြီးတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ထဲကို သူတို့ passport ၊ visa မလုပ်ဘဲနဲ့ တရုတ် ပြည်ကနေ အောက်လမ်းကနေ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ခိုးသွင်းလာတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက စိုးမင်းထိုက် ကုမ္ပဏီ က စင်္ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ တရုတ်ကနေမှတဆင့် မြောက်ကိုးရီးယားကို စေလွှတ်ပြီးတော့ သွင်းတာပါ။ ကျနော်သိ သလောက်ကတော့ မြန်မာပြည်က ကိုယ်စားလှယ်က စိုးမင်းထိုက် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ စိုးမင်းထိုက်ကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပေါ့။
ဦးမြင့်စိုး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဦးစိုးမင်းထိုက်ကိုတော့ ကျနော်မြင်ဖူးတာ ကျနော်တို့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဦးစိုး မင်းထိုက်က ကျနော်တို့စက်ရုံတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို သူကနေ အားလုံး သွင်းပါတယ်။ စိုးမင်းထိုက်က ကျနော်တို့စက်ရုံအားလုံး အပေါ်မှာ သြဇာသက်ရောက်တာကိုလည်း ကျနော်တို့ သိရတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီတော့ မြောက်ကိုးရီးယားတွေကို တရုတ်ပြည်ကနေ ဖြတ်ပြီးတော့ အောက်လမ်းကနေ သွင်းလာတော့၊ ဒါကို တရုတ်ပြည်က မသိဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား၊ တရုတ်ပြည်က သိသိနဲ့ပဲ သွားတာလား၊ ဘယ်လိုလဲ၊ အဲဒါ ဆရာကြီး ဘယ်လိုသိထားသလဲ။
ဦးမြင့်စိုး။ ။ တရုတ်အစိုးရက မသိလောက်ဘူးခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ တရုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ကိုးရီးယားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရုရှတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြောက်ကိုးရီးယားတွေလာရင် အဲဒီ စက်ရုံမှာရှိနေတဲ့ တရုတ်၊ ရုရှ၊ တောင်ကိုးရီးယား စတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအားလုံးကို တခြားစက်ရုံကို ပို့ပစ်လိုက်တယ်။ ကပစ(၃)(ဆင်တဲ)သော်လည်းကောင်၊ ကပစ(၅)(ဆင်တဲ) သော်လည်းကောင်း၊ နောက် သရက်မြို့ကို သော်လည်းကောင်း အဲဒီလိုမျိုး ပြောင်းရွှေ့ပေးပါဆိုပြီးတော့မှ ညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ ညွှန်ကြားလိုက်တာနဲ့ ကျနော်တို့ ကပစ(၁၀) မှာရှိနေတဲ့ တာဝန်ခံတွေ အားလုံးက အဲဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကို စက်ရုံအသီးသီးကို လှမ်းပြီး ပို့ထားတယ်။ အဲဒီလို ပို့ထားပေးရပါ တယ်။ ကျနော်တို့ မူဆယ်ဘက်ကနေ သွားခေါ်ရတာခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ မူဆယ်ကနေဆိုတော့ အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကကော မသိဘူးလား ခင်ဗျ။
ဦးမြင့်စိုး။ ။ သူတို့ တိုင်းမှူးတွေကတော့ သိတော့သိတယ်။ လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက် သူတို့ကိုတော့ message ပို့ထားရပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ၂၀၀၈ခုနှစ် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ မြောက်ကိုးရီးယားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လေယာဉ်ခရီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ(ကပစ)တွေရဲ့ အရာရှိတွေက မြောက်ကိုးရီးယားတွေကို မိမိတို့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ တွေရှိရာ မြို့တွေရွာတွေကို လေဆိပ်ကနေ တိုက်ရိုက်ခေါ်သွားရတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ဦးမြင့်စိုးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၉)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ဗိမာန်မှာ တောင်ကိုးရီးယား သမ္မတ Chun Doo Hwan နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေ လာရောက်ဂါရ၀ပြုမယ့်အချိန်မှာ လုံခြုံရေးတာဝန်တွေ ယူထားရတဲ့ တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ တွေထဲမှာ သန်လျင်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အမှတ်(၁)စစ်ဗျူဟာလက်အောက်ခံ ခလရ(၉၀)လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မြောက် ကိုးရီးယားသူလျှိုတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်မှူးဇင်မို၊ ဗိုလ်ကြီးကင်မင်ချူး၊ ဗိုလ်ကြီးဇင်ကီချူးတို့ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ဖောက်ခွဲပြီးသွားချိန်မှာ၊ သူတို့ကို လက်ရဖမ်းဖို့ အသေခံကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်အဖြစ် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်တာမှာ အခုအခါမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်သည်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ဦးထွန်းလင်းဟာ အဲဒီ ကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအချိန်က တပ်သားအဆင့် ထွန်းလင်းပါ။
ဦးထွန်းလင်း။ ။ ကျနော် အဲဒီ ခလရ(၉၀) တပ်ခွဲ(၁)၊ တပ်စု(၃)က ပေါ့။ ကျနော်တို့က၊ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ လုံခြုံရေး ၀င်နေရ တာ။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့ကျတော့၊ (၈)ရက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာပေါ့လေ၊ ကျနော်တို့ဆီကို ကြေးနန်းဝင်တယ်၊ တောင်ကိုးရီး ယားသမ္မတကြီး Chun Doo Hwan နဲ့ ၀န်ကြီးတချို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေး လာမယ်၊ နောက်တခါ (၉)ရက်နေ့မှာ ဒီ အာဇာနည်ကုန်းမှာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဂါရ၀ပြု၊ ပန်းခွေချ အခမ်းအနားရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့က stand by လုပ်ထားရတာပေါ့။ အတွင်း စည်း အပြင်စည်းတွေလည်း ကျနော်တို့ဆီကပဲ တာဝန်ယူထားရတာပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ၊ အဲဒါက တပ်ရင်းမှူးဆီကတဆင့် တပ်ခွဲမှူး၊ နောက်တခါ တပ်စုမှူးက ဗိုလ်ကြီး ဘယ်သူပါလဲခင်ဗျ။
ဦးထွန်းလင်း။ ။ ကျနော်တို့တပ်စုမှူးက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒုဗိုလ် မောင်မောင်အောင်ပေါ့၊ ကျနော်တို့က ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ‘ဆရာစံခန်းမ’ထဲမှာ တာဝန်ယူပြီး စခန်းချထားတာပေါ့နော်။ အဲဒီက နေပြီးတော့မှ ကျနော်တို့က ထွက်တာဆိုတော့၊ သူတို့ လမ်းကြောင်းသွား တဲ့အချိန်တွေ ကျနော်တို့က ထွက်ပြီးတော့ လုံခြုံရေးယူပေး၊ သူတို့ လမ်းကြောင်း ပြီးသွားရင် ကျနော်တို့က ဆရာစံခန်းမထဲမှာ ပြန်နေပေါ့နော်။ အခင်းဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၉)ရက် နေ့ကျတော့ ကျနော်တို့ မနက်စာ ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ ပေါက်ကွဲသံအကြီးကြီး ပေါ့နော်၊ ‘ဂျိမ်း’ ဆို တဲ့ အာဇာနည်ကုန်းက ကွဲလိုက်တဲ့ပေါက်ကွဲသံဟာ ကျနော်တို့ကတော့ အဲဒီအချိန်က အာဇာနည်ကုန်းကမှန်း မသိဘူးပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲမှာ ရှိနေတာကို တော်တော် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားလိုက်တယ်ပေါ့ နော်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့က သိလိုက် ပြီ၊ ဒါတော့ မိုင်းကွဲတာပဲလို့။ အဲဒီလို သိလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျနော်တို့ဆီ ကြေးနန်းဝင်လာတယ်၊ ချက်ခြင်း stand by လုပ်၊ ကားပေါ်တက်ရ မယ်ဆိုပြီး တခါထဲ ကျနော်တို့ ကားပေါ်တက်ပြီး အာဇာနည်ကုန်းကို ထွက်ခဲ့ရတာပေါ့၊ အဲဒီနေ့က။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီ မိုင်းကွဲသံနဲ့ လက်နက်ကြီးသံနဲ့ကို ဦးထွန်းလင်းတို့ သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြား သိပါသလား ခင်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကြားဖူးတာက ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိုင်းမှူးဖြစ်နေတဲ့၊ အခုတော့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွှန့် (၁၉၉၇ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆေက်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ အနားပေးခြင်းခံခဲ့ရသော သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဒုဗိုလ် ချုပ်ကြီး မျိုးညွန့်) ပေါ့။ သူက ဘုရားပေါ်ကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်လို့ ပထမ ယူဆတယ်လို့ သူ့ရဲ့ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကို ပြောပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဘုရားပေါ်ကိုတောင် ပြန်ပြီးတော့ အောက်ကနေပြန်ပစ်ခိုင်းဖို့ ညွှန်ကြားသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်လက်အောက် ခံအရာရှိတွေက ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ၀ိုင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်လိုက်ရတယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ မိုင်းကွဲသံနဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်သံနဲ့ကို ဆရာတို့လို တပ်သားအဆင့်ကတောင်မှ ဘယ်လိုများ ခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျ။ ဒုတိုင်း မှူးကတောင် ခွဲခြားပြီး မသိဘူး ဖြစ်နေလို့။
ဦးထွန်းလင်း။ ။ လက်နက်ကြီးဆိုရင် လေခွင်းသံကြီး အရင်လာတယ်လေ၊ လေခွင်းသံ အရင်ကြားရတယ်၊ အဲဒါ ပြီးတော့မှ ပေါက်ကွဲသံ ထွက်တယ်။ အခုဟာက လေခွင်းသံ လုံးဝမကြားပ၊ဲ ပေါက်ကွဲသံပဲ မြေကြီးကို အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားတဲ့ အသံဟိန်းထွက်လာတယ်၊ နောက်ကျတော့မှ အဲဒီ အာဇာနည်ကုန်းရောက်သွားတော့မှ အသေအချာ သိရတာက မိုင်းခွဲလိုက်တာ ဆိုတာကို သေသေချာချာသိရတယ်။ အာဇာနည်ကုန်းမှာ ကျနော်တို့က အတွင်းစည်းယူပေါ့၊ နောက်ဆုံးဗျာ သေသွားတဲ့လူတွေ၊ ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေကို အကုန်လုံး ချက်ချင်းသယ် တာပြုတာတို့ အဲဒီနေရာကို ရှင်းလင်းတာတို့ အကုန်လုံး လုပ်တာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ဆီကပဲ လုပ်ရတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ရောက်သွားတဲ့ အချိန် မှာတော့ တောင်ကိုးရီးယားသံရုံးက တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရယ်၊ ကျနော်တို့ မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီနေရာမှာ အနီး စပ်ဆုံးက ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ အမှတ်(၁) စစ်ဗျူဟာ ရှိတာကိုး၊ အမှတ်(၁)စစ်ဗျူဟာဆိုတာ ကျနော်တို့ ကန်တော်မင်ပန်းခြံထဲမှာ ထိုင် တာလေ၊ အဲဒီအချိန်က ရွှေတိဂုံဘုရားဘေးက ကန်တော်မင်ပန်းခြံထဲမှာ ဒီဗျူဟာရဲ့ရုံး ထိုင်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်(၁) စစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ညီစိန်တို့၊ နောက်တခါ အငြိမ်းစား ယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်ပေါ့ ဗျာ၊ သူကတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒုတိုင်းမှူးပေါ့၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးက ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးအောင်ပေါ့၊ အဲဒီ အချိန်တုန်းက။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်သည်ဟောင်း ဦးထွန်းလင်းပြောပြတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား ဖောက်ခွဲရေးသမား သူလျှိုတွေထဲက ဗိုလ်ကြီးကင်မင်ချူး နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဇင်ကီချူးတို့ကို သူတို့ လက်ရဖမ်းဆီးခဲ့ပုံတွေနဲ့ အခုအခါ ဦးထွန်းလင်းရဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား မြန်မာဆက်ဆံရေး ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပုံတွေကို နောက်သီတင်းပတ် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ ဆက်ပြီး တင်ဆက်ပေးသွား မှာဖြစ်ပါ တယ်။ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါ။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။
ဧရာဝတီ Friday, 26 November 2010 19:05
အပိုင်း ( ၁ ) ( ရေးသားသူ- မောင်မောင်ဝမ်း)
မကောင်းမြစ်တား၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊ အတတ်သင်စေ၊ ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင်၊ ၀တ်ငါးအင်၊ ဖခင်မယ်တို့တာ။
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ ဆောင်ပိုဒ်လေးပါ။တော်တော်များများရင်းနှီးနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိဘတွေက သားသမီးတို့အပေါ်ထားအပ်သော ၀တ္တရားများပေါ့၊ လောကမှာမိဘတော်တော်များများဟာ သားသမီးအပေါ်မှာမေတ္တာကြီးမားတတ်တယ်ဆိုတာ စာဖွဲ့အထူးပြောဘို့လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့သောချွှင်းချက်များတော့ရှိတာပေါ့လေ၊ ဒါကလည်းဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ၊ မိဘတွေက သားသမီးကိုသတ်ပစ်တာတို့၊ ပြည့်တံစာလုပ်ငန်းအတွက်ရောင်းချခဲ့တာတို့ ဆိုတာတွေက ကြုံရခဲတဲ့ကိစ္စပါ၊ ကြုံခဲ့ရင်တောင်မှ ရှားပါးတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိလာခဲ့ရင်တောင်မှ ဘယ်သူကမှ အားပေးအားမြှောက်နဲ့ ဂုဏ်ယူနေမှာမဟုတ်သလို ၀ိုင်းဝန်းပြစ်တင်ရှုတ်ချကြမှာအမှန်ပါပဲ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုမွေးထုတ်ခဲ့သူတွေဟာမိဘတွေဖြစ်သလို ၊ တိုင်းပြည်တပြည်မှာ အစိုးရဆိုတာကလည်း တကယ်တော့မိဘပါ ၊ မိဘအစစ်တွေမဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့ မိဘနေရာမှာရှိနေရတဲ့သူတွေလို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ သားသမီးများရဲ့ကောင်းမွေ၊ဆိုးမွေများကိုမိဘများကခံကြရသလို သားသမီးများအပေါ်တာဝန်ကျေကြဘို့ကိုလည်း မိဘတိုင်းနီးပါး ကြိုးစားအားထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ အစိုးရဆိုတာကလည်း ပြည်သူများရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေများကို ခံကြရပါမယ်။ ပြည်သူလူထုအပေါ်တာဝန်ကျေဘို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ မိဘနဲ့တူသောအစိုးရဖြစ်နေမှာပါ။ ဘယ်ပြည်သူလူထုမဆို မိဘနဲ့တူသောအစိုးရကို အလိုရှိကြမှာအမှန်ပါ။
တနေ့ .. ကျနော်အင်တာနက်ပေါ်မှာ G- talk ဖွင့်ထားတုန်း ၂ ပတ်ကျော်လောက်လိုင်းပေါ်မှာပျောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ကျနော့်တူတစ်ယောက်နဲ့ အဆက်သွယ်ပြန်ရပါတယ်။ သူက အခုမှ ၁၆ နှစ်သား ဆယ်တန်းတက်နေတယ် ကျနော်က အမေရိကံပြည်ထောင်စု နယူးရောက်ပြည်နယ် ၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့မှာနေတာပါ၊
“ ဦးဝမ်း… မြန်မာပြည်က ..အင်တာနက်တွေ..ရွှေးကောက်ပွဲနီးလို့လားမသိဘူးဖြတ်ထားတယ်”
“နောက်ပြီး လိုင်းတွေကလည်း.. အရမ်းနှေးတယ်ဗျာ.. အင်တာနက်သုံးရတာ အဆင်ကိုမပြေဘူး မီးကလည်းလာလိုက်မလာလိုက်နဲ့ ဦးတို့ဆီမှာရော အဲဒါမျိုးလိုင်းဖြတ်တာတွေ.. လိုင်းတွေနှေးတာတွေဖြစ်လား”……ကျနော်တချက်ပြုံးမိလိုက်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ရင်ထဲမှာတော့ တော်တော်လေးကိုထိခိုက်သွားပါတယ်။ သူက သူအမြင်နဲ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်ခဲကိုလှမ်းငြီးကြည့်လိုက်တာပါ…..
---- ဘယ်ရှိမလည်း သားရဲ့.. ဦးတို့ဆီမှာ မီးပျက်တယ်ဆိုတာ.. လည်းမရှိဘူး.. အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်ထားတာတို့.. နှေးတာတို့ဆိုတာမရှိဘူး……ကျနော့်တူလေးရဲ့သက်ပြင်းချသံကိုတချက်ကြားလိုက်ရအပြီး သူ့ဘက်က အင်တာနက်လိုင်းက ပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။ နောက်တခါ တတူတူနဲ့လှမ်းခေါ်ပြီးစကားဆက်ပြောမယ်ကြံတော့ စကားသံကပြောရလိုက်မရလိုက်နဲ့…… ကျနော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ သူငြီးမယ်ဆိုလည်းငြီးလောက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခု အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု့လုပ်ပေးတဲ့ ကုမဏ္ဍီဘယ်နှစ်ခုရှိလည်းမသိဘူး ဒီမှာတော့ ကျနော်တို့မြို့သေးလေးမှာတောင်မှ .. ကုမဏ္ဍီ ၅ ခုအပြိုင်ရှိပါတယ်။ သုံးစွဲရာမှာလည်း စာအုပ်တအုပ်က စာရွှက်တွေကိုလှန်ဖတ်နေသလိုမျိုး မြန်ဆန်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ( Liberal Democracy )ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရဟာဒါမျိုးပါ့လားစဉ်းစားနေတုန်း.. တခါ တူလေးဆီကလှမ်းခေါ်သံကြားလို့ လက်ခံနားထောင်လိုက်တော့ စကားနည်းနည်းပြောရပြန်တယ်……
“ ဦးဝမ်း.. အလုပ်နားနေရတယ်ဆို.”
“ အေးကွ.. ငါအလုပ်ကနားနေရတယ်”
“ ဟင်.. ဒါဆို ဦးဝမ်း ၀င်ငွေမရှိတော့.. ဘယ်လိုလုပ်မလည်း.. ဘာနဲ့စားကြမလည်း”
“ အစိုးရကကြွေးတယ်.. အစိုးရကပေးတယ်ကွ ”
“ ဟာ.. ဦးဝမ်းကလည်း.. သားက အတည်ပြောနေတဲ့ ဥစ္စာ.. နောက်နေတယ် ”
“ ဘယ်ကလားနောက်ရမှာလည်း.. ဦးအလုပ်ကနားနေရတော့.. အစိုးရက စားဘို့ဆိုပြီး တလ.. မိသားစု ၃ ဦးကို ဒေါ်လာ ငါးရာကျော်ပေးတယ် .. နောက်ပြီး တပတ်ကို ဒေါ်လာ ၂၅၀ ပေးတယ်ကွာ.. တလ ၁၀၀၀ ပေါ့ .. ငါမနောက်ပါဘူးကွာ.. တကယ်ပြောနေတာပါ ”
“ တကယ်ပေါ့သားရဲ့.. ဦးဝမ်း.. သားကိုဘယ်တုန်းကလိမ်ပြောဘူးလို့လည်း ”
“ အစိုးရက.. တလကို ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကျော် အလကားထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၁၃သိန်းလောက်ရှိတယ်.. သားဖြင့် ဦးဝမ်းပြောလို့သာယုံရတယ်.. ကြားတောင်မကြားဘူးဘူး.. သားသူငယ်ချင်းတယောက်အဖေဆို..စစ်တပ်ထဲကနေပင်စင်နဲ့ထွက်လာတာတောင်မှ.. တလတလ.. စားဘို့ အလျှဉ်မမှီဘူးဗျာ.. သနားပါတယ်..” သူရဲ့အသံတွေထဲမှာ ကရုဏာနဲ့ရောစွက်နေတဲ့ မကျေနပ်သံတချို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အမေရိကားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတယောက်ဟာ သက်ဆိုင်ရာ ကုမဏ္ဍီက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်နားလိုက်ရတယ်ဆို.. အဲဒီကုမဏ္ဍီနဲ့ အစိုးရပေါင်းပြီး ၀န်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ရပါတယ်။ တပတ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုတာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူး ( သူ အလုပ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ ၀င်ငွေအပေါ်တည်မှီပြီးဆုံးဖြတ်တယ်) ၊ ပြီးတော့ အစားအသောက်အတွက် မိသားစုဦးရေ အပေါ်တည်မှီပြီးပေးတယ်..အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂ နှစ်လောက်အထိပေးပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း အလုပ်တခုရအောင်ရှာပေါ့ ။ မရခဲ့ရင်ရောဆိုရင် အစိုးရကနေ တခါ လူမှု့ထောက်ပံ့ရေးအသွင်သဏ္ဍန်တမျိုးနဲ့ ထပ်ပေးပြန်တယ်။ ဒါကတော့ အမေရိကားမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို.. လ ၆၀ ( ၅ နှစ် ) ခံစားခွင့်ရှိတယ်၊
အစားအသောက်အတွက်ကတော့ တော်တော်ကြာကြာထိကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။အစိုးရဟာ လူထုကိုဘယ်တော့မှအငတ်မခံဘူး။ ဒါဆို နအဖပြောသလိုမျိုး အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေအများကြီးဆိုတာကို ကျနော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်တယ်။ အမေရိကားမှာ လူတွေကို ခရက်တစ် ( credit ) ဆိုတာနဲ့ ချုပ်ထားတယ် ခရက်တစ်ဆိုတာ အကြွေးဝယ်စနစ်နဲ့ပေးထားတဲ့ ကဒ်ကလေးတွေကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..လူတစ်ယောက်ရဲ့ရာဇ၀င်ဆို ပိုမှန်မလားမသိဘူး၊ လူတယောက်ရိုးသားတာ၊ အပြစ်မရှိတာ၊အလုပ်ကြိုးစားလုပ်တာ၊ ပစ္စည်းတွေကိုအကြွေးစနစ်နဲ့ဝယ်ရင်မှန်မှန်ပြန်ပေးတာ၊ရာဇ၀တ်မှု့ကင်းတာ၊စသဖြင့် ကျန်တာတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတာပေါ့ အဲဒါတွေကို အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ ပေးတယ်။ မေးစရာတစ်ခုရှိမယ်.. ခင်ဗျားက လိုခြင်တဲ့ ပစ္စည်းတခုကို အကြွေးနဲ့ဝယ်ပြီး ပြန်မဆပ်ဘူးဆိုရင်ရော ( ဗမာပြည်မှာဆို အကြွေးရရင်ဆင်တောင်ဝယ်စီးမဲ့သူများအတွက်)၊ ရတယ်။ မဆပ်နဲ့ ၊ အချိန်တန်လို့ လစဉ်ပေးရမဲ့ အကြွေးကို မပေးတော့ဘူးဆိုရင်.. အဲဒီပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင် ကုမဏ္ဍီတွေက လာသိမ်းမှာပဲ မပူနဲ့ ၊ မော်တော်ကားဆို ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖွက်ထား သူတို့ကသိတယ်.. ရေဒါစနစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာ။ ပြီးရင် ခင်ဗျား ခရက်တစ်ကဆိုးသွားပြီ ၊ ခရက်တစ်ဆိုးတော့ဘာဖြစ်မလည်း၊ ခင်ဗျားဘာမှအကြွေးဝယ်လို့မရတော့ဘူး၊ ဘဏ်တွေကလည်း ပိုက်ဆံချေးလို့မရတော့ဘူး၊ အနိမ့်ဆုံး အိမ်တောင်ဌားနေလို့မရတော့ဘူး၊အလုပ်တွေက လက်မခံဘူး၊ ခရက်တစ်ကောင်းရင်ရောဘာဖြစ်မလည်း အိမ်ဝယ်ခြင်တယ် ဒေါ်လာတသိန်းတန်လောက်အိမ်တောင်မှ အရစ်ကျဝယ်လို့ရတယ် တလခြင်းနည်းနည်းဆပ်သွားရတယ် ခင်ဗျားပေးတာမှန်လေ ခရက်တစ် အမှတ်ကတက်လေပဲ။ စ၀ယ်ဝယ်ခြင်း တစ်ပြားမှမကုန်ဘူး ကျနော်နေတဲ့ နယူးရောက်ပြည်နယ်မှာဆို ပထမဆုံးအိမ်ဝယ်မဲ့သူအတွက် အစိုးရက ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ လောက်အထိ အလကားပေးတယ် ။ ခင်ဗျား အလုပ်သာရှိ ( အနည်းဆုံး ၂ နှစ်လောက်ပေါ့ ) နောက်တခါ ခရက်တစ်လည်းကောင်းဆို အိမ်တလုံးတပြားမှမကုန်ပဲဝယ်လို့ရတယ်။ ပြီးမှ တစ်လခြင်း နည်းနည်းပြန်ဆပ်ပေါ့၊ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ခရက်တစ်ဆိုးတဲ့သူတွေအတွက် အိမ်ဌားနိုင်တဲ့ပိုက်ဆံရှိလည်း အိမ်ရှင်တော်တော်များများက ခရက်တစ်စစ်ဆေးကြည့်လို့ဆိုးတယ်ဆိုရင်.. မဌားဘူး။ အဲဒီတော့ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ရော၊ နောက်မေးစရာရှိနိုင်တာက.. အစိုးရက အမြဲထောက်ပံ့နေတော့.. ဗမာတွေးနဲ့ဆို အလုပ်မလုပ်ပဲထိုင်စားနေမယ်ဆိုရင်ရော… ဖြစ်တယ် ထိုင်စား။ ခင်ဗျား ခရက်တစ်ဆိုးနေမှာပဲ။ ခင်ဗျား အခွင့်ရေးတွေ အကုန်ဆုံးရှုံးမယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူး၊ အစိုးရကခင်ဗျားကိုကြွေးထားမယ်။ ခရက်တစ်ကောင်းရင် ခင်ဗျားလုပ်ငန်းတခုထူထောင်ခြင်တယ်ဆိုပါဆို့ . ဘဏ်တွေက ခင်ဗျားကို ပိုက်ဆံချေးခြင်ကြမှာ အလုအယက်ပဲ.. ဘာလုပ်ခြင်လုပ်ခြင်. သူတို့ထုတ်ချေးမယ်။ အမေရိကားမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်သော ခရက်တစ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ ပျင်းလို့မရဘူး၊
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်း ၀င်ငွေနည်းမိသားစုများကို အစိုးရကထောက်ပံ့တယ် နေထိုင်မကောင်း ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ရင် အစိုးရကကူတယ် ( ကုန်ခြင်သလောက်ကုန်ပါစေ ) ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာ ဆေးကုလိုက်ရတာ ဒေါ်လာ သိန်းနဲ့ချီကုန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အစိုးရက ကူတယ်။ ဒီမှာ ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံတွေဆိုတာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်တွေချည်းပဲ ဆေးကုသစရိတ်ကလည်းဈေးကြီးတယ်။( ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားမှာ ၀င်ငွေကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်မရဘူး၊) ကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ကုရတယ်။ အဲဒီ ကုမဏ္ဍီတွေကို ခင်ဗျားဆေးကုလို့ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အစိုးရကပေးတယ်။ဘာမှပူစရာမလိုဘူး၊ အလကားဆေးသွားကုရတာဆို သိမ်ငယ်စရာမလိုဘူး ၊ တကယ်တော့ အလကားကုတာမဟုတ်ဘူး ၊ ခင်ဗျားကုန်ကျမဲ့ငွေကို အစိုးရကပေးတာ။
တပ်မတော်သားတွေ ကဏ္ဍပြောပြဦးမယ်၊ ဒီမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေရောက်လာပြီး နေထိုင်ခွင့်တရားဝင်ရှိတဲ့သူတွေဆို စစ်ထဲဝင်ခြင်ကြတာအများကြီး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘ၀အာမခံချက်အပြည့်ရှိတယ်။ ရပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးပဲ။ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒေါ်လာ သိန်းချီ ( မြန်မာငွေ သိန်းထောင်ချီပြီး ) ပေးတယ်။ မိဘ၊သားသမီး၊မိန်းမ၊လင်ယောကျာင်္း သူတို့အတွက်တောင်မှ အားလုံးနေဘို့ ထိုင်ဘို့က အစအားလုံး အစိုးရက တာဝန်ယူပေးတယ်၊ သူတို့တတွေ အလုပ်လုပ်ခြင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အလုပ်လုပ်ခွင့် အခွင့်ရေး သူများထက်သာတယ် ( ဒါ စစ်သားမဟုတ်သေးဘူး စစ်သားဆွေမျိုးပဲရှိသေးတယ်)။ စစ်သားတွေပင်စင်ယူမယ်ဆို ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက်ကြည့်ပြီးလစာရကြတယ် ( အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ နဲ့ အထက်မှာရှိတယ် ) ဒါသာမန်စစ်သားအဆင့် အရာရှိတွေဆို အများကြီး ပင်စင်လစာရတယ်။သူတို့ အလုပ်လုပ်လိုသေးတယ်ဆိုရင် ချက်ခြင်း အလုပ်သမားရှာဖွေရေးဌာနတွေက အလုပ်ရှာပေးတယ်။ စစ်သားဘ၀မှာလည်း အလုပ်ချိန် ဒါမှမဟုတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မဟုတ်ပဲ အထက်အရာရှိက အောက်လက်ငယ်သားကို အမိန့်ပေးပိုင်ခွင့်၊ အာဏာပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ သွားပြလို့ကတော့ ပြသနာတက်ပြီသာပြင်ပေတော့ အဲဒီလို၊ စစ်သားက စစ်သားအလုပ်ပဲလုပ်တယ် တခြားအလုပ်မှာဝင်မပါဘူး ၀င်မရှုတ်ဘူး၊ အဓိကထူးခြားတာက စစ်သားတွေ၊ရဲတွေကိုလူထုကချစ်တယ် လေးစားကြတယ်။ ဗမာပြည်နဲ့မကွာလားဗျာ၊
အပိုင်း ၂ ဆက်ပါဦးမည်
DAB military Committee Press Release 1- 2010 (25-Nov-10)
DAB Military Committee Press Release _1-2010
DAB military Committee Press Release 1- 2010 (25-N...